कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: मिस ज्यापु प्रतियोगि नं.३ लिलिना महर्जन सँगको भलाकुसारी
मिस ज्यापु प्रतियोगि नं.३ लिलिना महर्जन सँगको भलाकुसारी
बीबीएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत पाँगाका लिलिना महर्जनले राष्ट्रिय ज्यापु दिवस र मखं ज्यापु कुमारी ३०० वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित दोश्रो मिस ज्यापु प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको छ । जसको फाइनल शो असोज ५ गते आर्मी क्लबमा हुँदैछ ।
यस प्रतियोगितामा भाग लिन कसले प्रेरणा दियो ?
—घर परिवारबाट नै प्रेरणा पाएको हँ ।
यस प्रतियोगितामा भाग लिएर के के सिक्नु भयो ?
— भाद्र १ गतेदेखि परम्परागत खेतीपाती, नेवारी खाना परिकार बनाउने, रक्सी, जाँड बनाउने र चिउरा कुट्ने सिकाइएको छ । साथै यही भाद्र ३० गते सुकुल बुन्न सिकाउन थसि लगेको थियो ।
यस प्रतियोगितामा भाग लिएर के ज्ञान पाउनु भयो ?
—मातृभाषाको महत्व, नेवाः परम्परा र संस्कृतिको बारेमा धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ । परालबाट पनि विभिन्न सामानहरु बनाउन सक्ने जानकारी हासिल गरें ।
यस प्रतियोगितामा मिस ज्यापुको पदवी पाउँछु भन्ने कतिको आशा छ ?
—मिस ज्यापुको पदवी पाउने आशाले नै भाग लिएको हुँ । तैपनि कुनै न कुनै पदवी पाउने आशा राखेको छु । मिस पपुलारीको लागि भोटिंगको व्यवस्था छ । भोटिंगको लागि एम जे ३ टाइप गरी स्पेश थिची अनि ४२४३ मा पठाउनु हुन अनुरोध गर्दछु ।
Posted by raj shrestha at 11:55 AM